Ukutshiza igadi: iingcebiso ezilungileyo kunye nezinye iindlela | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Hlaziya igadi yemifuno
Siyazi ukuba xa kufika imozulu entle kufuneka unake kakhulu okokoko kuqale ukuhlaselwa kwezinambuzane nezifo. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba ufunde ezona ngcebiso zilungileyo zokufaka igadi kumsi. Baninzi abantu abaqhekeke phakathi kwesidingo sokwenza njalo fumigation igadi yeziqhamo kwaye silwe ngokwebhayoloji ngezinto eziphilayo.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi iingcebiso zokufumana umsi wegadi kunye nento onokuyenza ukuze ube negadi ikwimeko entle.
1 Kufuneka uhlaziye igadi yeziqhamo
2 Izisombululo zasekhaya
3 Iindlela zokulawula izinambuzane nezifo
4 Iingcebiso zokutshiza igadi
Kufuneka uhlaziye igadi yeziqhamo
Injongo ephambili yokutshiza igadi kukuthintela lonke uhlaselo lwezinambuzane nezifo ukuze kugcinwe izityalo zakho zikhathalelwe. Ukuba nezityalo zikwimeko entle kufuneka sizazi kakuhle iimpawu zeso sikhulayo Ukuthintela uhlaselo lwezinambuzane kunye nezifo ngaphandle kwesidingo sokuphunga. Umzekelo, kufuneka sazi ukulungiswa okufanelekileyo komhlaba wezityalo, ukunkcenkceshela kunye nexesha lesichumiso, indawo, amaqondo obushushu, njl. Ukuba senza ukuba izityalo zethu okanye izityalo zikwimeko efanelekileyo nezona zilungileyo, kunqabile ukuba ihlaselwe zizitshabalalisi kunye nezifo.
Enye indlela yokuphepha ukutshiza igadi kukusebenzisa indlela yokujikeleza izityalo. Kukwalungele ukugcina indawo iphela ingenalo ukhula kunye nenkunkuma yegadi. Zonke ezi ndawo yindawo yokugcina iiparasites. Kukho izilwanyana eziluncedo ezondla ezinye izinambuzane ezinokuba yingozi. Ukusebenzisa ezi zinambuzane ngendlela yendalo kubizwa ngokuba kukulawula izinambuzane. Umzekelo, iladybug sisinambuzane esidla iintwala ezindala kunye nemibungu. Ezinye izinambuzane Isetyenziselwa ukulawulwa kwezinto eziphilayo izinambuzane zizinto ezithandazayo, iilizards, toads, spider, frogs, centipedes, Njl
Elinye icebo lokuphepha ukutshiza igadi yakho kukutsala iintaka kwigadi yakho. Ungasebenzisa iibhokisi zokuzalela, abaxhasi kunye nabaseli ukuze iintaka zihlale kwisitiya sakho. Iintaka zitsaleleka kwii-conifers kunye nezihlahla ezinje ngeeblueberries, holly kunye namaqunube amnyama, phakathi kwabanye. Ngeentaka kwicala lakho, unokulwa nenani elikhulu leenambuzane.
Ukuba kukho izinambuzane ezinambuzane eziphindaphindayo unyaka nonyaka, ungafaka amayeza amancinci okuthintela. Ngale ndlela, uya kuthintela ukusebenzisa isixa esikhulu seekhemikhali ezinokuthi zonakalise umgangatho wamanzi nomhlaba.
Esinye sezisombululo zamakhaya ezixhaphakileyo ekuhlaleni sisisombululo secuba. Kwaye ungasebenzisa iigram ezingama-50 zecuba kwilitha yamanzi kwaye ungeze i-10 gram yesepha emhlophe. Konke oku kungafafazwa kwizityalo zethu ukunqanda uhlaselo lwezinambuzane ezinje nge mealybugs, aphids kunye nezinye iintshulube.
El Bacillus thuringiensis yintsholongwane leyo ibulala izinambuzane kwinqanaba lazo lokuba nemibungu kwaye ithengiswa ngembiza ngokungathi iyimveliso eqhelekileyo yezilwanyana. Le ntsholongwane ingaba yenye indlela yokulwa izinambuzane nezifo kwizityalo zakho. Ungasebenzisa isepha yokubulala izinambuzane ngokudibanisa isepha, ioyile kunye namanzi ukujongana nazo zonke izinambuzane ezinomzimba othambileyo. Izityalo kufuneka zifakwe emanzini ukuze isepha isebenze. Akucetyiswa ukuba usebenzise isepha yasekhaya kunye nezityalo.
Isalfure isetyenziselwa ukunyanga ukungunda nokungunda kwaye inentshukumo elungileyo ngokuchasene neentubi.
Iindlela zokulawula izinambuzane nezifo
Masibone ukuba zeziphi iindlela ezahlukeneyo zolawulo lwezitshabalalisi kunye nezifo ezinokwenziwa egadini yakho nasegadini yakho:
Ukutshiza ngemichiza: izinambuzane, iiacaricides, fungicides, njalo njalo zingene apha.
Ukuncitshiswa kwemveliso yendalo: kukho izinto zokubulala iintsholongwane eziphilayo okanye ezenziweyo ezenziwe ngokupheleleyo kunye nefungicides ezinokuba nefuthe elifanayo kwiikhemikhali.
Ukubanjwa ngesandla kwezinambuzane: Le ndlela iyakusetyenziswa kuphela ukuba inambuzane inkulu kwaye ayininzi kakhulu.
Ukulawulwa kwezinambuzane zebhayoloji: inento yokwenza nayo yonke into ekhankanywe apha ngasentla malunga nokungeniswa kwezinambuzane neentaka ezinokulawula ngokwendalo ukusasazeka kwezinambuzane eziyingozi.
Iingcebiso zokutshiza igadi
Ukuba awunandlela yokuzikhethela kwaye kuya kufuneka uchumise igadi yakho, siza kukuxelela ezinye zeengcebiso ezilungileyo:
Sebenzisa imveliso elungileyo: Kufuneka ibe kukuchonga isitshabalalisi esihlasela izityalo zethu ukuze sisebenzise imveliso efanelekileyo kwaye sisuse ngokuchanekileyo isilwanyana esitshabalalisayo. Kuya kufuneka wazi kakuhle ukuba yeyiphi imveliso yokhuseleko lwesityalo oza kuyisebenzisa.
Sebenzisa umzuzu wokuxuba: Kuyacetyiswa ukuba ungagcini iimveliso esele zixutywe namanzi kuba ekuhambeni kwexesha ziphulukana nokusebenza kwazo. Kuyimfuneko ukubala kakuhle isixa semveliso ye-phytosanitary efunekayo ukulungelelanisa umxube kakuhle kwaye uyisebenzise ngalo mzuzu.
Musa ukutshiza izityalo kwilanga elipheleleyo: ukuba uqhuba ukufutha kwilanga elipheleleyo ungasonakalisa isityalo okanye izityalo eziphathwayo. Elona xesha lilungileyo lokucutha igadi ngeyure yokugqibela yokugqibela yosuku.
Sukusebenzisa iimveliso ezivulekileyo zezilwanyana: iimveliso ezingaphezulu okanye ezingaphantsi kwezempilo zinobungakanani beminyaka embalwa. Ihlala iphulukana nokusebenza kwaye inokuba yingozi kwizityalo zakho.
Faka isicelo semveliso yezempilo nesitshizi: Isitshizi siwenza umsebenzi ngokukhawuleza okukhulu, kube lula kwaye kube lula ngakumbi kwaye sandise ukusebenza.
Akusoloko kucetyiswa ukutshiza: Njengoko besesitshilo ngaphambili, kuyathakazelisa ukufundisisa ngaphambili ukuba ngaba kunyanzelekile ukuba kusetyenziswe imveliso yezilwanyana ukufafaza izityalo. Kufuneka yenziwe xa izinambuzane ezonakalisa izityalo ziye zaba sisinambuzane.
Enye into: Kubalulekile ukuba ungasoloko usebenzisa imveliso efanayo yococeko kuba izinambuzane ezinyangiweyo zenza ukunganyangeki kwiimveliso kwaye zikhusele. Zonke izicelo ezilandelayo aziyi kusebenza kakuhle kwaye zonakalise umhlaba.
Coca isitshizi: Emva kokuqhumisa igadi, kufuneka kucocwe oobhaka okanye izitshizi ezisetyenziselwa ukufafaza ngesepha yendalo. Kuyimfuneko ukuba ngamanzi, uyidibanise kwaye uyifumane kwakhona ngamanzi.
Lungisa i-pH yamanzi: i-pH yamanzi kufuneka ichanekile ukuze i-insecticide, i-miticides kunye ne-fungicides zihlale ixesha elide kwizityalo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nokufaka amanzi kumyezo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Hlaziya igadi yemifuno
Yezandla ngezinto ezenziwe ngokutsha